सुनवलबाट सिक्ने कि ! – समावेशी
सुनवलबाट सिक्ने कि !
आइतबार, जेठ ०९, २०७८ | १४:०७:५४ |
सुनवल : कोरोना सङ्क्रमित वृद्धि भएपछि नववलरासी (बर्दघाट सुुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिकाले हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियू) सहितको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित दश श्ययाको एचडियू र १९ श्ययाको अक्सिजन जडित आइसोलेशन रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकामै सुविधायुक्त अस्थायी कोभिड अस्पताल शुरु भएपछि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बाहेकका सङ्क्रमितको उपचारमा सहज भएको नगरप्रमुख भीमबहादुर थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
सुनवल–१ सोमनाथस्थित बाल सिकाइ केन्द्रको दुईतले भवनमा अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ । पहिलो तलामा अक्सिजनसहितको आइसोलेशन र दोस्रो तलामा एचडियू सेवा छ । भवनको नजिकै रहेको सुनवल जेसिजको भवनमा २४औँ घण्टा एकजनाको दरले स्वास्थ्यकर्मी रहने गरी सचिवालय बनाइएको छ ।
अहिले १४ सङ्क्रमितको अस्पतालमा उपचार भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । एचडियू सञ्चालनका लागि सर्वाेत्तम सिमेन्ट उद्योग प्रालिले करीब रु ७० लाख बराबरको मेडिकल उपकरणसहितको सामग्री उपलब्ध गराएको हो । अस्पतालमा अहिले दुई चिकित्सक र १२ स्वास्थ्यकर्मी रहेको उक्त अस्पतालका डा चन्द्रशेखर यादवले बताउनुभयो । एचडियू सेवाका लागि थप तीन चिकित्सक थप्न लागिएको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनमा सुनवल जिल्लामै नमूना र अब्बल रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर राय बताउनुहुन्छ । “सुनवलमा व्यवस्थित तरिकाले कोरोना नियन्त्रणको प्रयास गरेको पाइएको छ, राम्रो व्यवस्थापन र स्तरीय सेवा दिएको छ, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सुनवलवासी सबैको सक्रियता र सहयोगले यो सम्भव देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हाल सुनवलमा ४३५ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने ३३ ले सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ । नगरपालिकाले होम आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितको पनि घरमै पुगेर उपचार तथा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । होम आइसोलेशनमा बसेकालाई अक्सिजन आवश्यक पर्दा तत्कालै उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने चिकित्सकको परामर्श र १३ वटै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पिसिआर जाँच गर्न चाहनेका लागि नगरपालिकाले हरेक दिन बुटवलसम्म लैजाने ल्याउने गरी यातायातको सुविधा व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाले कोभिडको कारणले मृत्यु हुनेको घरमा कन्ट्याक्ट टे«सिङमा परेकालाई एन्टिजिन परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ । नगरपालिकासँग रहेका तीनवटा एम्बुलेन्समध्ये एउटा कोभिड बिरामी बोक्न, एउटा अन्य बिरामी बोक्न र एउटा सुत्केरी बोक्न प्रयोग गरिएको छ ।
कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन र सङ्त्रमणबाट नागरिकको ज्यान जोगाउन नगरपालिकाले थप रु २५ लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ । अस्पतालका डा यादवले अधिकांश बिरामीहरु जटिल अवस्था भएपछि मात्र अस्पताल आउने गरेकाले समस्या भइरहेको बताउनुुहुन्छ । यसअघि बर्दघाट नगरपालिकाले पनि एचडियूसहितको आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा रहेका सात स्थानीय तह र जिल्ला अस्पतालमा गरी १०३ श्ययाको अक्सिजनसहितको आइसोलेशन श्यया रहेको छ ।
नेकपा (एस)को पार्टी सुदृढीकरण अभियान
स्पेनका सभामुख भ्रमणमा
आज नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै